Farmaajo iyo Rooble yaa u roon reer Gedo? | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo iyo Rooble yaa u roon reer Gedo?
RW Rooble, wuxuu diyaarado gargaar ah ka dejiyay Gedo, si loo garab istaago kumanaanka ruux ee abaaruhu wax yeelleeyeen, wuxuu kulamo muuqda iyo kuwa qarsoonba la qaatay siyaasiyiinta iyo odayasha gobolka, si loo helo xalka mushkiladda uu xaafiiska Farmaajo abuuray.
MUQDISHO, Soomaaliya – Tan iyo markii uu Maxamed Cabdullahi Farmaajo, noqday Madaxweynaha Soomaaliya, horraantii 2017, gobolka Gedo ayaa ahaa caqabad gobol, [Juballand] iyo mid heer federal, taasoo unuggeedu yahay xasarad qabiil iyo damaca boob doorasho.
Farmaajo, wuxuu dadaal xooggan ku bixiyay, siduu Gedo uga dhigi lahaa maamul si gooni ah u taagan oo si ku meel gaar ah uga madax bannaan Dowlad gobolleedka Juballand iyo Axmed Madoobe, taasina waxa ay sababtay inay gobolkaas ku habsadaan arrimo bani’adannimo oo daran.
Gedo waxa marti galisay dagaallo siyaasadeed iyo ku kuwo sokeeye oo Farmaajo abuuray, kuwaas oo sababay geerida iyo dhaawaca dad rayid ah oo aan waxba galabsan iyo barakaca kumanaan qoys oo shacab ah, dagaalladaas waxa ay dhex mareen shaqsiyaad ka soo wada jeeda gobolka.
Gedo, waxaa ka dhacay abaar daran, gurmad gaar ah iska daaye, Farmaajo, wuxuu hor istaagay hay’ado caalami ah iyo waddamo doonayay in ay gargaar bani’aadannimo gaarsiyaan shacabka abaaru saameeyeen, si loo badbaadiyo nafta oonka iyo baahida u dhimaneysa.
Wuxuu geed dheer iyo mid gaaban u koray, sidii loo hor istaagi lahaa, garab istaag bini’aadannimo oo Kismaayo uga yimaada Garbahaarray, isagoo adeegsanaya saraakiil ku heyb ah oo ka tirsan hay’adda NISA, taas oo keentay in ay sii xumaado xaaladda nololeed ee danyarta.
Farmaajo, intaas iyo in ka badan oo dhibaato ah, ayuu gaarsiiyay Gedo, Madaxweynihii hore, wali iskuma dayin, inuu xal u helo xiisadaha iyo xasaradaha uu abuuray ee dadkiisu eedeen, wuxuuna wali u tafa-xeydan yahay , sii murjinta xaaladda gobolka, si uu danihiisa u gaaro.
Taas baddelkeeda Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, wuxuu xalka dhibaatooyinka Farmaajo falkiyay u tagay Garbahaarray, wuxuu magacaabay guddi dib u heshiisiin, si ay isku cafiyaan walaalaha Farmaajo isku diray ee aan fasiri karin waxa ay isku heystaan.
Sidaas oo ay tahay, maamulka gobolka, oo ay ugu horreeyaan guddoomiyayaasha qaar ka mid ah degmooyinka Gedo, waxa ay si joogto ah Ra’iisul Wasaaraha dalka uga af-lagaadeeyaan warbaahinta bulshada, halkii ay uga mahad celin lahaayeen garab isaagga uu iyaga u gooni yeelay.
Sababta ugu weyn ee reer Gedo ku diiddan yihiin RW Rooble, ayaa ah inuu doonayo in Gedo lagu qabto doorasho lagu tartamo oo aan cid gaar ah u xirneyn, halka taas iyagu ka door bidayaan doorasho xiran oo kaliya Farmaajo kuraas ka helo, waana halka ubucda u ah khilaadka Madoobe iyo Madaxtooyada.
Sida ay ku doodayaan falanqeeyayaasha siyaasadda, ee aan indhaha qabyaaladda ku eegin arrimaha Soomaaliya, shacabka Gedo, waxaa si buuxda u garab istaagay Sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha, Rooble, kaas oo muddo sanad ka badan u taagan xasillinta gobolka iyo in doorasho xalaal ah ka dhacdo Garbahaarrey.